Warar faahfaahsan oo ka soo baxaya isku daygii dil ee Gudoomiyaha G/Mudug – SBC
Warar faahfaahsan oo ka soo baxaya isku daygii dil ee Gudoomiyaha G/Mudug
Posted by editor on September 23, 2011 Comments
Warar faahfaahsan ayaa ka soo baxay isku dil ee caawa lala damcay in lagu qaarijiyo Gudoomiyaha Gobolka Mudug ee maamulka Puntland Maxamed Jaamac Yuusuf kaasi oo gaarigii uu saarnaa lagula eegtey magaalada Gaalkacyo qarax wadada dhinaceeda la dhigay.
Weerarkan qarax oo burburiyey gaarigii uu saarnaa Gudoomiyaha hase yeeshee weerarkaasi aanay waxba ka soo gaarin, waxaase la sheegay in mid ka mid ah ilaaladiisa uu dhaawac ka soo gaarey qaraxaasi bam.
Qaraxan miino oo ahaa mid aad u culus ayaa ka dhacay agagaaraha xaruntii hore ee shirkada Galcom ee xaafada Israac ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo, iyadoo qaraxaasi si weyn looga maqley guud ahaan magaalada isla markaana ay argagax ka qaadeen dadka degmada.
Gudoomiyaha oo saxaafada la hadley qaraxaasi ka dib ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka badbaadey wuxuuna sheegay in uu socdo baaritaan ku aadan cida ka dambeysay weerarka isagoo sheegay inaanu dooneyn in uu ka hordhaco baaritaankaasi.
Qaraxan lagu doonayey in lagu qaarajiyo Gudoomiyaha ayaa ku soo aadayaa iyadoo todobaadkan lagu diley waqooyiga magaalada Gaalkacyo xildhibaan Xildhibaan C/raxmaan Maxamuud Xaaji (Koodhaa) oo ka mid ahaa xildhibaanada bnaarlamanka Puntland.
Magaalada Gaalkacyo ayaa mudooyinkii ugu dambeeyey waxay wehel u aheyd dilal qorsheysan oo ka dhan saraakiisha, odayaasha, culuma’udiinka, masuuliyiinta maamulka Puntland & waliba ganacsatada.
waa wax aad looga naxo qaraxyada hareeyey gobolka mudug iyo guud ahaan dilalka qorshaysan ee gobolka ka socda ilaahay ayaa badbaadiyey gudoomiyaha alaha unaxariisto xildhibaankii dhintay sidoo kale dilka masuuliyiinta waxa garab socda dilka loo gaysanayo saxaafada puntland ugu danbeeyeey xasan ateeno
Kkkkkkkk.taasi waxay digniin utahay cid kasta oo ay soo doortaan dadka aan kitaabka allaah wax ku xukumayn amba raba shuruucda gaalada caalamka inay hirgeliyaan.mujaahidiintu inaanay dayn doonin iyada oo aan loo eegayn qabiil waalid walaal qaraabo.intaba aabohood haduu mujaahidiinta daaquutka raaco iyo cilmaaniga madaxkudhufanayaan.hadii cid weji laga doonayo allaah weeye cidkasta oo xukumada gaalada raacsan hunguri kahayso inuu jaga kaqabto.waa dil ayyi qabiila 40guri haday shareecada qaadato waxa lagu dilo amba ay wax kudilaan waa jihaad